Xidigaha Xulka Banaadir oo garaacay dhigooda Hirshabeelle. | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Xidigaha Xulka Banaadir oo garaacay dhigooda Hirshabeelle.
Xidigaha Xulka Banaadir oo garaacay dhigooda Hirshabeelle.
Kulanka ka tirsan tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedkada oo ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa galabta foodda is daray xulalka kubadda Cagta Banaadir iyo Hirshabeelle, kaasi oo ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Eng, Yariisow.
Cayaarta oo ay u soo daawasho tageen dad weyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir, isla markaana kala taageerayay labada Xul ee Banaadir iyo Hirshabeelle, isla markaana sitay hal ku dhigto ayaa muujiyay sida ay u taageersanyihiin tartamada nuucaani oo kale ah oo la xiriirta isdhexgalka bulshada.
Labada xul ayaa soo bandhigay cayaar aad u xiisa badneyd oo ay ku qanceen dhamaan dadkii u soo daawasho tagey garoonka, waxaana cayaarta qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay la yimaadeen Xulka kubadda cagta ee Banaadir, taas oo aheed gool kulaad.
Qeybtii labaad ee cayaarta ayaa labada dhinac waxa ay muujiyeen dadaal aad u badan, waxaana cayaarta waqtigii loogu talagalay ay ku soo idlaaday 1-0 oo ay guusha ku raacday xidigaha Xulka Banaadir.
Xulka kubada cagta Banaadir oo ciyaaray kulankoodii 2aad ayaa waxay ku hogaaminayaan guruubka ay ku jiraan 4 dhibcood.
Previous articleWasiirka Xanaanada Xoolaha oo furay shirka wadatashiga caafimaadka xoolaha+(SAWIRRO).
Next articleWaddada Ceel Daahir-Ceerigaabo oo laami la Saarayo+(SAWIRRO).